Mbibi nke Permian: njirimara na ihe kpatara ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị maara na n'oge ochie niile agafeela ụwa anyị, enweela mbibi dị iche iche. Taa, anyị ga-ekwu maka Mbibi Permian. Ọ bụ otu n'ime ọdachi 5 na-emetụta ụwa anyị kemgbe ụwa.
Ya mere, anyị ga-arara isiokwu a nye ihe niile ịchọrọ ịma banyere mkpochapu Permian na ihe nsonaazụ ya.
1 Mbibi Permian
2 Ihe butere nbibi nke Permian
2.1 Mmetụta nke meteorite
2.2 Methane hydrate ahapụ
Ọ bụ ezie na ọtụtụ mmadụ kwenyere na mkpochapụ nke dinosaurs bụ nke kachasị njọ, ọ bụghị. Enwere otutu omumu emere site na data ndi okacha amara choputara na mpaghara a, ha kwuputara na mkpochapu mmadu bu na njedebe nke Permian na mmalite nke Triassic. Ihe mere eji ele ya anya dị ka nke kachasị njọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ndụ niile dị na ụwa apụ n'anya.
Na mbibi a, ihe karịrị 90% nke ụdị ihe dị ndụ niile dị na mbara igwe kpochapụrụ. Ọ dị mkpa ịmara na ụwa anyị dị ndụ n'oge ahụ. Eziokwu ahụ bụ na e nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị anụmanụ na ndụ na-etolite emeela site na ọmụmụ ọmụmụ ihe. N'ihi mkpochapụ nke Permian, ụwa ụwa tọgbọrọ n'efu. Ọnọdụ jọgburu onwe ya nke mbara ala mepụtara pụtara na ọ bụ naanị ụdị ụfọdụ ga-adị ndụ.
Mbibi a jere ozi dị ka mmalite maka nlọghachi nke ụdị ndị ọzọ na-achịkwa afọ ndị na-esote nke ụwa ma bụrụ ndị dinosaur a ma ama. Nke ahụ bụ, n'ihi ikpochapu Permian, anyị nwere ịdị adị nke dinosaurs.
Ihe butere nbibi nke Permian
Mbibi nke mere na njedebe Permian na mmalite Triassic bụ isiokwu nke ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na-amụ maka ọtụtụ afọ. Imirikiti ọmụmụ ihe etinyewo mgbalị ha n'ịchọpụta ihe butere ụdị mbibi a. N'ihe banyere ihe mere ogologo oge gara aga O siri ike ịhụtala ezigbo ihe akaebe pụtara ihe kpatara ọdachi a. Nwere ike ịnwe naanị nchepụta nke etinyere na ọmụmụ miri emi na nke akọ na uche nke ihe ochie ndị ahụ achọtara.
Otu n'ime isi ihe kpatara kpatara mkpochapụ Permian ji kwenye bụ na ọ na-eme nnukwu ọkụ ọkụ. Ebe ọ bụ na ugwu ndị na-agbọpụ ọkụ na-akpa ike, ha na-ezipụ gas dị ukwuu na mbara ikuku. Ikuku ndị a mere ka mgbanwe ikuku dị na mbara igwe nke mere ka ụmụ anụmanụ ghara ịdị ndụ.
Ọrụ mgbawa ama enen̄ede ọsọn̄ idem ke kiet ke otu ikpehe ke ikpehe Siberia. Mpaghara a juputara na ugwu mgbawa taa. N'ime oge Permian, mpaghara a dum nwere ntiwapụ na-esochi nke were afọ otu nde. Naanị ị ga-echerịrị ugwu mgbawa na-arụsi ọrụ ike ruo otu nde afọ iji ghọta na ikuku nwere ike ịgbanwe ihe mejupụtara ya wee bụrụ nsị.
Ọgba mgbawa niile gbapụtara ọ bụghị naanị wepụtara ọtụtụ lava, kamakwa gas. Gas dị n'etiti nke anyị na-ahụ carbon dioxide. Ihe omume ndị a zuru oke iji kpata mgbanwe ihu igwe dị egwu, nke mere ka ọnọdụ okpomọkụ ụwa dum dị elu.
Ọ bụghị naanị elu ala ka mgbawa ugwu gbawara. Mmiri mmiri nwetakwara nnukwu mbibi site na mmetọ siri ike n'ihi ọkwa nke ụfọdụ ihe na-egbu egbu sitere na ugwu mgbawa. N'ime ihe ndị a na-egbu egbu anyị na-achọta Mercury.
Mmetụta nke meteorite
Uzo ozo nke edobere iji kowapu mkpochapu nke Permian bu nke meteorite. Ọdịda nke meteorite bụ ma eleghị anya ihe kachasị egosipụtara maka ndị ọkachamara niile na mpaghara a. Enwere ihe omumu banyere ihe ndu ya na nkukota nke nnukwu meteorite nke metutara elu uwa. Ozugbo akwa meteorite a megidere ụwa, o mere ka ọgba aghara na mbibi zuru ebe niile. Mgbe nkwekọrịta a, enwere mbelata ndụ zuru oke nke mbara ala.
Na kọntinent nke Antarctica, nnukwu ugwu nke ihe dị ka ihe dị ka kilomita 500 na dayameta. Nke ahụ bụ, maka asteroid ịhapụ oghere nke nha a, ọ ga-ekwe omume na ọ ga-atụle ma ọ dịkarịa ala kilomita 50 na dayameta. N'ụzọ dị otú a, anyị na-ahụ na oke mmetụta meteorite nwere ike ịbụ ihe kpatara ọnwụ nke ọtụtụ ndụ na mbara ala.
Otu ndị ọkà mmụta sayensị ahụ na-amụ banyere ihe kpatara mkpochapụ nke Permian bụ ndị na-ekwusi ike na zipu na mmetụta nke asteroid tọhapụrụ nnukwu bọọlụ ọkụ. Nnukwu bọl ọkụ a mepụtara ikuku nke na-agba ọsọ dị ihe dịka kilomita 7000 kwa elekere. Na mgbakwunye, enwere ịkpalite mmeghari agwa na iru gafee ihe ọ̀tụ̀tụ̀ e ji atụ̀ ihe bụ́ nke a maara ugbu a. A ghaghị iburu n'uche na nkwekọrịta nke ụdị meteorite dị ka nke anyị na-ekwu nwere ike ịmepụta ike weputara ihe dika ijeri megaton 1000. Maka nke a, mmetụta nke meteorite na ụwa anyị bụ otu n'ime ihe ndị kachasị anabata nke mkpochapụ Permian.
Methane hydrate ahapụ
Ihe ozo mere eji kpochapu Permian malitere bu site na nhapụ nke methane hydrates. Anyị maara na a pụrụ ịchọta nnukwu ego nke methane hydrates siri ike n’elu oke osimiri. Ka okpomọkụ ụwa na-amụba, otú a ka okpomọkụ nke oké osimiri dị. N'ihi ọrụ mgbawa ma ọ bụ nkwekọrịta asteroid, mere ka ụwa na-ajụkarị okpomọkụ ụwa. N’ihi ntakịrị mmụba a na ọnọdụ mmiri, methane hydrates na-agbaze. Nke a na - eme ka ikuku methane buru ibu wepụta n’igwe.
A ghaghi iburu n'uche na methane bu ahihia griin na nwere oke ikike ime ka okpomoku diwanye elu, ebe obu na o nwere oke ikike ijide okpomoku. A na-ekwu maka ịrị elu nke ihe dịka ogo 10 na nkezi ụwa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihe kpatara mkpochapụ Permian na mkpa ọ dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Mbibi Permian